Xog: Maxaa u sabab ah in Eritrea ay dhex-dhexaadiso Somalia iyo Imaaraadka? | allsaaxo online
Xog: Maxaa u sabab ah in Eritrea ay dhex-dhexaadiso Somalia iyo Imaaraadka?
Imaaraatka Carabta ayaa kaalin weyn ku lahaa Isku soo dhawaanshaha Ethiopia iyo , iyadoo uu dhaqaalo uu ku bixiyay sidii labada dhinac heshiis ay u gaari lahaayeen, Imaaraatka inuu la dhinac noqdo Ethiopia iyo Eritrea waxaa qasbay markii uu waayay heshiisyadii dekadaha ee Soomaaliya iyo Jabuuti.
Eritrea iyo Somalia ayaa hadda yeelanaya xiriir isku soo dhawaansho, waxaana 15 sano kadib ay is dhaafsanayaan safaarado, iyagoo safiiro magacaabi doonaan.
Siyaasadda Cusub ee Gobolka, ayaa timid markii heshiisyo ay gaareen Ethiopia iyo Eritrea, Imaaraatka Carabta ayaana hogaanka labada dal guddoon siiyay Bilado kadib heshiiskoodii.
Golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Somalia ayaa ansixiyay sharci ogolaanaya in shirkadda DP World aysan ka shaqeyn karin dalka, waxaana sharcigaasi uu horyaala madaxweynaha Somalia oo aan wali saxiixin.
Haddii Eritrea ay ka shaqeyso isku soo dhawaanshaha Imaaraatka iyo Somalia, waxaana la ogeyn sida xaalka Shirkadda DP world noqon doono.
Wasiirka warfaafinta Somalia Daahir Maxamuud Geelle, ayaa sheegay in Eritrea iyo Somalia ay ka shaqeyn doonaan horumarka dalka geeska africa.
“Dabcan Dowladda Eritrea iyo Imaaraadka oo isku fiican, waxay kaalin mug leh oo macno leh ka qaadan kartaa inay isku soo dhoweyso Soomaaliya iyo Imaaraadka oo arrimo badan oo la kala tabanayay ay beryahan jireen”ayuu yiri Wasiir Daahir Geelle.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ahaa mid mugdi galay, tan iyo wixii ka dambeeyay bishii April ee sanadkan markii Ciidamada ammaanka Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qabteen lacag gaareysay 10-milyan oo u socotay Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho.
Booqashadii ra’iisul wasaare Abiy Axmed uu ku yimid Somalia 16 June 2018 iyo heshiisyadii afarta dekadood ee uu la galay madaxweynaha Somalia, ayaa dhalisay shaki badan, maadaama ka hor booqashada Abiy ee magaalada Muqdisho, uu la kulmay masuuliyiin ka tirsan Imaaraatka Carabta.
Waxaa sidoo kale Booqashadii Abiy Ahmed ee Muqdisho ka hor, Imaaraatka Carabta ay bangiga Ethiopia ku shubeen dhaqaalo gaaraya 3 milyan oo doolar, taasi oo la sheegay in lagu kabayay dhaqaalaha Ethiopia.
Imaaraatka ayaa joojiyay howlihii tababar ee uu ka waday magaalada Muqdisho, markii uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay Somalia, waxaana joogsaday dhaqdhaqaaqyo badan oo ay ka wadeen Somalia, laakiin ma aysan joojin dhaqdhaqaaqii ka socday qaar kamid ah gobolada dalka.
Waxaa jirtay dacwad dowladda Somalia ka gudbisay Imaaraatka Carabta oo loo diray Qaramada Midoobay iyo Jaamacadda Carabta, taasi oo ku aadaneyd inay faragelin toos ku hayaan Somalia.
Ka sokow Imaaraatka in xiriirka u la lahaa Somalia uu xun yahay, haddana xulufada Sacuudiga ayaa hogaanka Somalia ku xaq liya inay Qatar taageersan yihiin, laakiin dowladda waxay sheegtay inay dhex dhexaad ka tahay khilaafkii dhexmaray sanad ka hor Qatar iyo Xulufada Sacuudiga.
Isbaheysiga Cusub ee Gobolka oo Xulufadda Sacuudiga ay wadeen ayaa Caqabad ku noqon kara danaha Wadamada Turkiga & Qatar ka leeyihiin wadamada geeska Africa, gaar ahaan Somalia.
W/Q. Maxamed Ciise Maxamuud